နာရူတို - ဝီကီပီးဒီးယား
နာရူတိုသည် ဂျပန်ရိုးရာ အန်နီမဲ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသော အန်နီမဲများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နာရူတိုကိုရေးသားသူမှာ မာဆာရှိကီရှီမိုတို ဖြစ်ပါသည်။ ဇာတ်လမ်းမှာ ဥဇူမာကီ နာရူတို အမည်ရသော ဆယ်ကျော်သက် နင်ဂျာ(shinobi)ပေါက်စလေး သည် သူ့ကို တစ်ရွာလုံးက အသိအမှတ်ပြုရန်ကြိုးစားပုံနှင့် သူတို့ ဒေသ၏ အကြီးအကဲ(kage)ကို လေးစားမှုနှင့် သူတို့ဒေသခေါင်းဆောင်(kage) ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပုံကို ဇာတ်လမ်းဆင် ရိုက်ကူးထားပါသည်။ နာရူတိုဇာတ်လမ်းတွဲများသည် Akamaru Jump ဟူသော တစ်ခန်းရပ် အန်နီမီး ဇာတ်လမ်းတို ကနေစတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
Naruto ကို Shueisha မဂ္ဂဇင်းဖြစ်သော Weekly Shōnen Jump တွင် ၁၉၉၉ မှ ၂၀၁၄ အထိထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ tank 72bon (စာအုပ်) ဖြင့်အတွဲ ၇၂ တွဲဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဒီ manga ကို Pierrot နှင့် Aniplex မှထုတ်လွှင့်သည့် anime ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်၊ ဂျပန်သည် ၂၀၀၂ မှ ၂၀၀၇ အထိဖြစ်စဉ် ၂၂၀ ဖြစ်သည်။ ကာတွန်းကွန်ယက်နှင့် YTV တွင် ၂၀၀၅ မှ ၂၀၀၉ အထိထုတ်လွှင့်သည်။ အင်္ဂလိပ်နာတာသည် ၂၀၀၅ မှ ၂၀၀၉ အထိထုတ်လွှင့်သည်။ Naruto: Shippuden, မူရင်းစီးရီး၏နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ဂျပန်၌ပြသခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း Disney XD တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးပထမ ဦး ဆုံးအဖြစ်အပျက် ၉၈ ခုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဇာတ်လမ်း မှစတင်၍ ၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီလတွင် Adult Swim ၏ Toonami programming block သို့ကူးပြောင်းခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်၏လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုသည်ယနေ့ထိအရွယ်ရောက်သောရေကူးတွင်အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ anime စီးရီးအပြင် Pierrot သည်ရုပ်ရှင် ၁၁ ခုနှင့်မူရင်းဗီဒီယိုကာတွန်း ၁၂ ခု (OVAs) ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အခြား Naruto နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများတွင်ကုမ္ပဏီများစွာကတီထွင်ထားသောပေါ့ပါးသောဝတ္ထုများ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကဒ်များရှိသည်။
Viz Media သည်မြောက်အမေရိကထုတ်လုပ်မှုအတွက် manga နှင့် anime များကိုလိုင်စင် ချ၍ Naruto အားသူတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ် Weekly Shonen Jump မဂ္ဂဇင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ Anime စီးရီးများသည်အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဩစတြေးလျတို့တွင် ၂၀၀၆ နှင့် ၂၀၀၇ အသီးသီးတွင်စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်များနှင့်စီးရီးမှ OVA အများစုကိုလည်း Viz ကဖြန့်ချိခဲ့ပြီးပထမဆုံးသောရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ပြသခဲ့သည်။ Viz Media သည် Anime စီးရီးနှစ်ခုအား၎င်းတို့၏ streaming ၀ န်ဆောင်မှု Neon Alley တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်စတင်လွှင့်ခဲ့သည်။ Naruto ၏ဇာတ်လမ်းသည် Naruto ၏သား Boruto Uzumaki နှင့် Boruto တွင် - Naruto နောက်မျိုးဆက်များ - Boruto သည်သူ့အဖေ၏လမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်မည့်အစားကိုယ်ပိုင် Ninja လမ်းကိုဖန်တီးလိုသည်။ ။
Naruto သည်သမိုင်းတွင်စတုတ္ထမြောက်အရောင်းရဆုံး manga စီးရီးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင် ၄၆ နိုင်ငံတွင်သန်း ၂၅၀ ရောင်းချခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Viz Media ၏အရောင်းရဆုံး manga စီးရီးတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သူတို့၏ volumes များ၏၎င်းတို့၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုချက်များကို USA Today နှင့် New York Times အရောင်းရဆုံးစာရင်းတွင်အကြိမ်များစွာတွေ့ရသည်။ သတ္တမမြောက်အတွဲသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် Quill Award ကိုရရှိခဲ့သည်။ သုံးသပ်သူများသည် manga ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ခိုင်မာသောဇာတ်လမ်းများနှင့်ကောင်းစွာကွပ်ကဲသောတိုက်ပွဲမြင်ကွင်းများကိုချီးကျူးခဲ့သည်။ တချို့ကရန်ပွဲမြင်ကွင်းများဇာတ်လမ်းနှေးကွေးခံစားရတယ်။ ဝေဖန်သူများကလာမည့်ခေတ်တွင်အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သော manga သည်ဂျပန်ဒဏ္myာရီနှင့်ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒမှယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရည်ညွှန်းချက်များကိုအသုံးပြုသည်။
၁.၁ အပိုင်း (၁)
၁.၂ အပိုင်း (၂)
၃.၂.၁ အပိုင်း (၁)
၃.၂.၂ အပိုင်း (၂)
Nine-Tails ဟုလူသိများသည့်အစွမ်းထက်သောမြေခွေးသည် Ninja World ရှိ Great Shinobi နိုင်ငံ ၅ ခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့် Konoha, Fourth Hokage မှခေါင်းဆောင်သည်မွေးကင်းစသား Naruto Uzumaki ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိမြေခွေးများကိုတံဆိပ်ခတ်ကာ Naruto အားသားရဲ၏အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံစေသည်။ ဒါက Naruto ရဲ့အဖေကိုသေစေပြီးတတိယ Hokage ဟာအငြိမ်းစားယူပြီးပြန်လာပြီး Konoha ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်။ Konoha ရွာသားများသည် Naruto ကို Nine-Tails တို့၏အိမ်ရှင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် Naruto ကိုမကြာခဏလှောင်ပြောင်သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်များကိုမည်သူ့ကိုမျှမတားမြစ်ရန်တတိယဟော့ကက်ဂ်မှထုတ်ပြန်သောအမိန့်ကြောင့်၊ ၁၂ နှစ်ကြာသည်အထိ Naruto သည် Nine-Tails နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမသိရှိပါ။ Mizuki, ပြန်လည်ဖောက်ပြန်သော ninja, Naruto အားအမှန်တရားကိုဖွင့်ဟသောအခါ။ ထို့နောက် Naruto သည် Mizuki ကိုတိုက်ခိုက်ရာတွင်အနိုင်ယူပြီးသူ၏ဆရာ Iruka Umino ၏လေးစားမှုကိုရရှိခဲ့သည်။
များမကြာမီ Naruto သည် ninja တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး Sasuke Uchiha နှင့်သူမကြာခဏယှဉ်ပြိုင်လေ့ရှိသည်။ သူသည်စိတ်သောကရောက်နေသော Sakura Haruno နှင့်အတွေ့အကြုံရှိသော sensi လက်အောက်တွင်အထက်တန်းလွှာ ninja Kakashi Hatake အောက်တွင် Team7ကိုဖွဲ့စည်းသည်။ ကျေးရွာတိုင်းမှ Ninja အဖွဲ့များနည်းတူ Team7သည်ရွာသူရွာသားများတောင်းဆိုသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုပြီးမြောက်စေပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စများလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ရံတော်များဖြစ်ခြင်းအထိလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းအထိဖြစ်သည်။
Land of Waves တွင်အဓိကပါဝင်သောမစ်ရှင်များစွာပြီးနောက် Kakashi သည် Team7အား Ninja စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ပေးပြီး၊ အဆင့်မြင့်ရာထူးသို့တက်ရန်နှင့် Chunin Exams ဟုခေါ်သော ပို၍ ခက်ခဲသောမစ်ရှင်များကိုယူရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ စာမေးပွဲကာလအတွင်း Orochimaru သည်လိုချင်နေသောရာဇဝတ်သားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး Konoha ကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးတတိယဟော့ကိုင်းကိုလက်စားချေရန်သတ်ခဲ့သည်။ ဒဏ္legာရီဆန်သော ninjas သုံး ဦး အနက်မှ Jiraiya သည် Fifth Hokage ခေါင်းစဉ်ကိုငြင်းဆိုပြီးသူသည်ပဉ္စမ Hokage ဖြစ်ရန်ရွေးချယ်လိုက်သော Tsunade ကို Naruto ဖြင့်ရှာဖွေသည်။
ရှာဖွေစဉ်အတွင်း Orochimaru သည် Sasuke အားသူ၏အစွမ်းထက်သည့်မျိုးရိုးဗီဇအမွေအနှစ်ဖြစ်သောကြောင့် Sharingan ကိုလေ့ကျင့်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။ Sasuke သည် Konoha တွင် Naruto ကိုပြန်ပေးဆွဲရန်ပြသည့်အခါသူ၏အစ်ကို Itachi ကိုသတ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီးနောက်သူသည် Itachi ကိုသတ်ရန်လိုအပ်သည့်ခွန်အားရရှိရန် Orochimaru နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ Sasuke သည် Konoha ရွာမှထွက်ခွာချိန်နှင့် Tsunade သိသောအခါ Sasuke ကိုပြန်လည်ရယူရန်နင်ဂျာအပါအ ၀ င် Ninja အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုပို့သည်။ သို့သော် Naruto ကသူအားအတင်းအကျပ်ပြန်ပို့ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ Naruto နှင့် Sakura သည် Sasuke ကိုအရှုံးမပေးပါ။ Naruto သည် Konuke ကို Jiraiya မှထွက်ခွာပြီးနောက်တွင်သူသည် Sasuke နှင့်ထပ်မံတွေ့ဆုံရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသည်။ Sakura သည် Tsunade ၏အလုပ်သင်ဖြစ်လာသည်။
နှစ်နှစ်ခွဲကြာပြီးနောက် Naruto သည် Jiraiya နှင့်အတူသူ၏လေ့ကျင့်မှုမှပြန်လာသည်။ Akatsuki သည်အစွမ်းထက်သော Tailed Beasts ၏အိမ်ရှင်များကိုပြန်ပေးဆွဲသည်။ Team7နှင့်အခြား Leaf Ninja များသည်သူတို့နှင့်တိုက်ခိုက်ပြီးသူတို့၏အသင်းဖော် Sasuke ကိုရှာဖွေသည်။ Akatsuki သည်အမြီးဖြင့်သိမ်းထားသောသားရဲခုနစ်ကောင်ကိုဖမ်းယူ။ ထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးယခု Kazekage ဖြစ်သော Gaara မှလွဲ၍ အားလုံးသောအိမ်ရှင်များအားသတ်ပစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် Sasuke သည် Orochimaru ကိုအပ်နှံပြီးလက်စားချေရန် Itachi နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ Itachi စစ်ပွဲမှာသေဆုံးပြီးနောက် Sasuke ဟာ Akatsuki ကိုတည်ထောင်သူ Tobi ဆီကသိသွားတယ်။ Itachi ဟာ Konoha ရဲ့အထက်အရာရှိတွေဆီကအာဏာသိမ်းမှုကိုတားဆီးဖို့သူ့မျိုးနွယ်စုကိုဖျက်ဆီးဖို့အမိန့်ရခဲ့တယ်။ သူက Sasuke ကိုကယ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လက်ခံခဲ့တယ်။ ဤဖွင့်ဟချက်ကြောင့် Sasuke သည် Konoha ကိုလက်စားချေရန် Akatsuki သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ Konoha ninjas များသည် Akatsuki အဖွဲ့ဝင်များကိုအနိုင်ယူသောအခါ Akatsuki ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင် Nagato သည် Jiraiya ကိုသတ်ပြီး Konoha ကိုဖျက်ဆီးသည်။ သို့သော် Naruto ကသူ့ကိုအနိုင်ယူပြီးရွေးလိုက်သည်။ ကျေးရွာ၏လေးစားမှုနှင့်လေးစားမှုကိုရရှိခဲ့သည်။
agato ကွယ်လွန်ချိန်တွင် Tobi သည် Konoha ကိုတည်ထောင်သူဖခင်တစ် ဦး ဖြစ်သူ Madara Uchiha အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခံရပြီးသူသည် Tailed Beast ကိုးကောင်စလုံးအားလူသားအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်လုံလောက်သောအစွမ်းထက်သောထင်ယောင်ထင်မှားပြုမှုကိုပြုလုပ်ရန်ကြေငြာခဲ့သည်။ Ninja ကျေးရွာငါးရွာမှခေါင်းဆောင်များသည်သူ့ကိုကူညီရန်ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး Tobi နှင့်သူ၏မဟာမိတ်များကိုတိုက်ခိုက်ရန်အင်အားစုများ စုပေါင်း၍ ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်မဟာမိတ်ငါးနိုင်ငံ၏မဟာမိတ်များဖြစ်သော Shinobi အင်အားစုများနှင့် Akatsuki ၏ဖုတ်ကောင်ကဲ့သို့သော ninjas များ၏အင်အားစုများအကြားစတုတ္ထမြောက် Shinobi ကမ္ဘာ့စစ်ပွဲဖြစ်လာသည်။ Kage Five သည်စစ်ကိုသတိမပြုမိသော Naruto အား Kumogakure (Hidden Cloud Village) အနီးရှိလျှို့ဝှက်ကျွန်းလိပ်တစ်ခုတွင်ထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားသည်။ သို့သော် Naruto သည်ထိုကျွန်းမှရှစ်အမြီး၏အိမ်ရှင် Killer Bee နှင့်အတူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သည်။ Killer Bee ၏အကူအညီဖြင့် Naruto သည်သူ၏ Tailed Beast ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်သည်စစ်မြေပြင်သို့ ဦး တည်သွားသည်။
ပtheိပက္ခအတွင်း Tobi သည် Obito Uchiha ဖြစ်ပြီး Kakashi ၏အသင်းဖော်ဟောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသေပြီဟုယူဆရသည်။ Madara အစစ်အမှန်သည် Obito ၏အသက်ကိုကယ်ဆယ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်သူတို့ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ Sasuke သည် Konoha ၏သမိုင်းကိုသိရှိလာသောအခါသူ၏မျိုးနွယ်စုပြိုလဲသွားသည့်အခြေအနေများအပါအ ၀ င်ရွာအားကာကွယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး Naruto နှင့် Sakura နှင့် Madara နှင့် Obito တို့၏အစီအစဉ်များကိုတားဆီးရန်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့သည် သို့သော် Madara ၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ရှေးဟောင်းမင်းသမီး Kaguya Otsutsuki ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်လူသားအားလုံးကိုနှိမ်နင်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ ပြုပြင်ထားသော Obito သည် Team7ကိုသူမအားရပ်တန့်ရန်ကူညီသည်။ Kaguya တံဆိပ်ခတ်ပြီးတာနဲ့ Madara လည်းသေသွားတယ်။ Sasuke သည်အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး Tailed Beasts များအားလုံးကိုထိန်းချုပ်သည်။ သူသည်လက်ရှိကျေးရွာစနစ်ကိုအဆုံးသတ်ရန်အတွက်သူ၏ရည်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြသည်။ Naruto က Sasuke ကိုသူနဲ့သူ့အစီအစဉ်ကနေဖျောင်းဖျအောင်လုပ်တယ်။ နောက်ဆုံးစစ်ပွဲမှာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သတ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါ Sasuke ဟာရှုံးနိမ့်မှုနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဝန်ခံခဲ့တယ်။ စစ်အပြီးတွင် Kakashi သည်ဆဌမ Hokage ဖြစ်လာပြီး Sasuke အားသူ၏ပြစ်မှုများအတွက်ခွင့်လွှတ်ခဲ့သည်။ နှစ်များကြာပြီးနောက် Naruto သည် Hinata Hyuga ကိုလက်ထပ်ပြီး Seakh Hokage ဖြစ်လာစဉ်တွင် Kakashi ရာထူးမှဆင်းပြီးနောက်မျိုးဆက်ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် Shueisha က Masashi Kishimoto မှတစ်ချက်တည်းသော manga Karakuri ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် Hop Step Award တွင်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရသည်။ Kishimoto သည်နောက်ဆက်တွဲစီမံကိန်းအတွက်မူကြမ်းများကို မကျေနပ်၍ အခြားစီမံကိန်းတစ်ခုတွင်လုပ်ကိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းအသစ်သည်မူလက Naruto ကိုစားဖိုမှူးတစ် ဦး အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Kishimoto သည်မူလအားဖြင့် Naruto ကိုမြေခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်စေလိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်စိတ်ကူးပေါ် အခြေခံ၍ ၁၉၉၇ နွေရာသီ Akamaru Jump ၏ပြissueနာအတွက် Naruto ကိုတစ်ချက်တည်းဖြင့်ဖန်တီးခဲ့သည်။ စာဖတ်သူများ၏စစ်တမ်းတစ်ခုတွင်ရရှိသည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်တုံ့ပြန်မှုများရှိသော်လည်းကီရှီမိုတိုသည်အနုပညာနှင့်ဇာတ်လမ်းကိုမနှစ်သက်သဖြင့်သူသည်၎င်းကို ninjas အကြောင်းပုံပြင်အဖြစ်ပြန်လည်ရေးခဲ့သည်။
Naruto ၏ပထမအခန်းကြီးရှစ်ခန်းကိုအပတ်စဉ်Shōnen Jump ၌မပြခင်စီစဉ်ထားပြီး၎င်းအခန်းများသည်မူလကအနုပညာအနုပညာပြားများစွာကို Konoha ကျေးရွာအားသရုပ်ဖော်ခဲ့သည်။ Naruto ပွဲထွက်လာသည့်အချိန်တွင်နောက်ခံအနုပညာသည်ဇာတ်ကောင်များကိုအလေးပေးမည့်အစားရှားပါးခဲ့သည်။ Kishimoto သည် Chakra (Naruto ရှိ Ninjas မှအသုံးပြုသောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်) သည်စီးရီးများကိုဂျပန်ဘာသာအဖြစ်ဖန်တီးသည်ဟုစိုးရိမ်မှုများရှိသော်လည်း၎င်းသည်ပျော်စရာဖတ်ရန်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်နေဆဲဖြစ်သည်။ Kishimoto သည် Godzilla ၏ပရိတ်သတ်ဖြစ်သည်။ Kishimoto သည်သတ္တဝါများကိုဆွဲရန်ဆင်ခြေပေးလိုသောကြောင့်အမြီးအသားများဒဏ္myာရီကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သူကပြောကြားခဲ့သည်မှာအပိုင်း (၁) ၏အဓိကဆောင်ပုဒ်မှာလူများသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး မည်သို့လက်ခံသည်ကိုဥပမာအားဖြင့်စီးရီးများတလျှောက်တွင် Naruto ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကိုးကား၍ ဖြစ်သည်။
manga အပိုင်း II အတွက်ကီရှီမိုတိုသည်စာဖတ်သူများလိုက်နာရန်လွယ်ကူသော panel layout များနှင့်အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထားရှိရန်နှင့် "ပုံမှန် manga စတိုင်ကို overdo လုပ်ခြင်း" ကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူကသူ၏ပုံဆွဲဟန်သည် "ဂန္ထဝင်မန်ဂါကြည့်ခြင်းမှ ပို၍ လက်တွေ့ကျသောအရာတစ်ခုခုသို့ပြောင်းလဲသွားသည်" ဟုယူဆသည် Sasuke Uchiha သည်သူ့အစ်ကို Itachi ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော arc ကိုအဆုံးသတ်လိုသောကြောင့် Kishimoto သည် ၄၃ တွင်ပုံမှန် volumes များထက်အခန်းကြီးများပိုမိုပါဝင်သင့်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်မှာကီရှီမိုတိုသည်စာဖတ်သူများအားတောင်းပန်ခြင်းသည်အသံပမာဏသည် ၄၃ သည်ပုံမှန် volumes များထက်ပိုမိုဈေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Naruto ကိုသူဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာ Kishimoto ကတခြားshōnen manga ကိုသူ့အလုပ်အတွက်လွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ပြီးဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်အခြေခံပြီးဇာတ်ကောင်များကိုသူမတူအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်။ အက္ခရာများကိုကွဲပြားသောအဖွဲ့များအဖြစ်ခွဲခြားခြင်းသည်အုပ်စုတစ်ခုစီကိုသီးခြားအရသာတစ်ခုပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ Kishimoto အနေဖြင့်အသင်း ၀ င်တစ် ဦး ချင်းစီကိုစွမ်းရည်တစ်ခုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှုန်းမြင့်မားစေပြီးအခြားတစ်ယောက်တွင်အရည်အချင်းမရှိသူဖြစ်ချင်သည်။ သူဟာအချစ်ဇာတ်လမ်းအကြောင်းရေးဖို့အခက်တွေ့ခဲ့ပေမယ့်အပိုင်း ၂၈ မှစပြီး manga အပိုင်း II မှာပိုပြီးအလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ ဇာတ်ကောင်ထဲကိုလူကြမ်းအဖြစ်လူသိများအောင်သူကဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများနဲ့နှိုင်းယှဉ်။ သူတို့ကွဲပြားမှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ငယ်ရွယ်သောဇာတ်ကောင်များသည်လူကြမ်းများထက်သိသိသာသာအားနည်းနေပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Kishimoto သည်ထိုအချိန်ကသူတို့ကိုအသက်ကြီးလာစေရန်နှင့်ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် ellipsis ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကီရှီမိုတိုသည်ဂျပန်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့သောတရုတ်ရာသီဥတုအခြေအနေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။  အဆိုပါရာသီခွင်လက်ဆိုင်းဘုတ်များဒီကနေအစပြု။  Kishimoto သည် Naruto manga ၏အဓိကနေရာကိုဖန်တီးနေစဉ်တွင်သူသည် Konoha ရွာအတွက်ဒီဇိုင်းများကိုအစတွင်အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။  ဇာတ်လမ်း၏စိတ်ကူးသည်သူ့အား“ အတွေးအခေါ်များစွာမပါဘဲအလိုအလျောက်တွေးမိသည်။ ” သို့သော်ရှုခင်းသည်ဂျပန်နိုင်ငံအိုကာယာမာစီရင်စု၏စီရင်စုရှိသူ၏အိမ်ပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်လာသည်ဟုဝန်ခံသည်  storyline ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်သတ်မှတ်မည်ကိုအတိအကျမပြောသောကြောင့်သူသည်အစဉ်အလာစတိုးဆိုင်များကဲ့သို့သောစီးရီးများတွင်ခေတ်သစ် element များကိုထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။  သူသည်မော်တော်ကားများ၊ လေယာဉ်များနှင့်ရိုးရိုးကွန်ပျူတာများအပါအ ၀ င်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။
Serialization စတင်သောအခါ Kishimoto သည်အဆုံးသတ်ဇာတ်ကောင်နှစ်ယောက်ဖြစ်သော Naruto နှင့် Sasuke၊ Pain ဟုလည်းလူသိများသော Dak villain နှင့် Kishimoto အရအရေးကြီးသော arc သည် Pain Invasion Arc ဖြစ်သည်။ ဤသည် arc ကို Naruto ကိုအဆုံးသတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့လမ်းခင်းခဲ့သည်။ Naruto သည်လူကြမ်းအဖြစ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံယူခြင်းအားဖြင့်သူသည်စစ်အကြောင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အဖြေမရနိုင်သောကြောင့်သူကိုယ်တိုင် Naruto ကြုံခဲ့ရသည်အထိသွားရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် Nagato (သို့) Pain မှာ Naruto အတွေ့အကြုံရှိတာကြောင့်သူ့ရဲ့ဆရာ Jiraiya ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး Naruto ကိုအရင်ကလုပ်ခဲ့သလိုမျိုးရန်သူကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့သူတစ်ခါမှမကြုံဖူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုနောက်ဆုံးတော့သူမဖြေနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဟာ Naruto အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုပါ။ Kishimoto သည် ထိုအချိန်မှစ၍ သူသည်စတုတ္ထမဟာ Shinobi စစ်ပွဲကိုဖန်တီးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Naruto သည်၎င်းကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပြီးစစ်အပြီးတွင်စီးရီးများကိုအဆုံးသတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Nagato သည် Nagato ကိုခွင့်လွှတ်သကဲ့သို့ Naruto အား Sasuke ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့်ဤအဖြစ်အပျက်များသည်အဆုံးသတ်သွားသည်။ Kishimoto သည် mangata ၏အစောပိုင်းအဆင့်များမှ Hinata Hyuga ကို Naruto ၏အချစ်ဆုံးမိတ်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Hinata သည် Naruto ကိုစီးရီးမစတင်မီကတည်းကအမြဲလေးစားလေးစားခဲ့ပြီး Kishimoto ကသူတို့နှစ်ခုဟာဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သူမ Naruto ကို Sakura Haruno ကိုလက်ထပ်စေချင်တဲ့အတွက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကသူ့ဇနီးကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် Kishimoto က Sakura ကိုနောင်ဇနီးဖြစ်မယ့်အစား Naruto ရဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ Hinata ပထမဆုံးပေါ်လာသည့်အခါကိရှီမိုတိုသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတြိဂံပုံသုံးခုကိုဖွဲ့စည်းရန်စဉ်းစားခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်တိုက်ခိုက်မှုသည် manga ၏အဓိကအာရုံစိုက်ရာနေရာဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သောကြောင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများအတွက်နေရာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ၂၀၀၉၊ ဩဂုတ်လတွင်ကီရှီမိုတိုသည်စီးရီး၏နောက်အခန်းများကိုမည်သို့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်နှင့်မည်သို့အဆုံးသတ်မည်နည်း၊ စီးရီးကိုအပြီးသတ်နိုင်ရန်စွမ်းအင်လိုအပ်နေသေးကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤသည်ကြောင့် Naruto နှင့် Nagato ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီးနောက်မကြာမီတွင် manga မှအဆုံးသတ်သွားမည်ကိုစိုးရိမ်သောစာဖတ်သူများအကြားစိုးရိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်မကြာမီ Kishimoto ကအရှည်ပိုကြီးလိမ့်မည်ဟုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Naruto ကို ၁၉၉၉ စက်တင်ဘာ ၂၁ မှနံပါတ် ၄၃ အရ Weekly Shōnen Jump မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်အထိနံပါတ် ၅၀ ဖြစ်သော Shueisha မဂ္ဂဇင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ manga ကိုtankōbon (စာအုပ်) ပုံစံဖြင့်ဂျပန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများမှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးအတွဲ ၇၂ ခု - အပိုင်း ၁ အတွက် ၂၇ ခုနှင့်ကျန်အပိုင်း ၂ ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ပထမအခန်းကြီး ၂၃၈ ခန်းသည်အပိုင်း ၁ ဖြစ်ပြီး Naruto ဇာတ်လမ်း၏ပထမအပိုင်းဖြစ်သည်။ အခန်း ၂၃၉ မှ ၂၄၄ တွင် Kakashi Hatake ၏နောက်ခံကိုအာရုံစိုက်သည့် gaiden (ဘေးတိုက်ဇာတ်လမ်း) ပါရှိသည်။ ကျန်ရှိသောအခန်းကြီး (၂၄၅ မှ ၇၀၀) သည်အပိုင်း (၂) နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်နှစ်စဉ်နှစ် ၁-၂ နှစ်အတွင်းကွာဟမှုကိုဆက်လက်ဖော်ပြသည်။ ပထမဆုံးtankōbonကို ၂၀၀၀ ခုနှစ်မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Shueisha သည် Naruto ရုပ်ရှင်များမှ အခြေခံ၍ ani-manga tankōbonအများအပြားကိုလည်းထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးဆဲလ်ဖုန်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အတွက်ဂျပန်ဘာသာဖြင့်သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက် Shueisha Manga Capsule ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Naruto: Seventh Hokage and Scarlet Spring (Naruto - ナト外 - 外 ・ ・ 七目目火影と緋色の花つ月, Naruto Gaiden: Nanadaime Hokage မှ Akairo no Hanatsuzuki သို့) အဓိကဇာတ်ကောင်များ၏ကလေးများအပေါ်အခြေပြုသည့်မှတ်တမ်းများကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ 27ပြီ ၂၇ ရက်ထုတ် Weekly Shōnen Jump ၏ဂျပန်နှင့်အင်္ဂလိပ်စာစောင်များနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၆ ရက်အခန်း ၁၀ ခန်းတွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
မြောက်အမေရိကတွင်လိုင်စင်ရသည့်ဗားရှင်းမထွက်ခွာမီ Naruto ကိုပန်ကာဖြင့်ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းတွင်ရနိုင်သည်။ အခွင့်အရေးများကို Viz Media မှရရှိခဲ့သည်။ သူသည် Naruto အားသူတို့၏မနုologyဗေဒရုပ်ပြမဂ္ဂဇင်း Shonen Jump တွင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထုတ်မှစတင်ထုတ်ယူခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်နှစ်ကုန်တွင်ဂျပန်ပုံစံနှင့်အမီလိုက်ရန်အချိန်ဇယားကိုအရှိန်မြှင့်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်သုံးလအတွင်း (အတွဲ ၃၄ မှ ၄၄) အထိအတွဲ ၁၁ ခုထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်သုံးလတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အပိုင်း ၁ အတွဲ ၂၇ စလုံးကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင်သေတ္တာအိတ်ထဲတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မေလ ၃ ရက်နေ့တွင် Viz သည်စာအုပ် ၃ ခုပါသည့်စာအုပ်တစ်အုပ်စီကို omnibus ပုံစံဖြင့်စတင်ရောင်းချခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မတ်လ ၃၁ ရက်အထိနိုင်ငံပေါင်း ၉၀ တွင်ခွင့်ပြုထားပြီး manga ကိုနိုင်ငံပေါင်း ၃၅ ခုတွင်စာရင်းသွင်းထားသည်။ Carlsen Comics သည်စီးရီးများကိုဒေသဆိုင်ရာဌာနခွဲများမှလိုင်စင်ချပေးပြီးဂျာမန်နှင့်ဒိန်းမတ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသည်။ ပိုလန်ကို Japonica Polonica Fantastica၊ ရုရှား၌ Comix-ART၊ ဖင်လန်၌ Sangatsu Manga၊ ဆွီဒင်တွင် Bonnier Carlsen၊ ဆွီဒင်တွင် Bonnier Carlsen နှင့်အီတလီတို့ကို Panini Comics တို့ကဒေသတွင်းဘာသာစကားများကိုပြင်သစ်နှင့်ဒတ်ခ်ျဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေမှုများအတွက်လိုင်စင်ရရှိသည်။
Ken Lee Taira မှ Rock Lee no Seishun Full-Power Ninden အမည်ရှိဟာသသရုပ်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည့်ရော့ခ် Lee နှင့်သူ၏ Ninja Pals တို့သည်ရော့ခ် Lee ဟူသောဇာတ်ကောင်ကိုအဓိကအာရုံစိုက်သည်။ ninja တစ်ယောက်ကဲ့သို့ခိုင်မာသော်လည်း jutsu စွမ်းရည်မရှိပါ။ ၎င်းသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၄ ရက်အထိ Shueisha's Saikyō Jump မဂ္ဂဇင်းတွင်စတင်ခဲ့ပြီး Studio Pierrot မှထုတ်လုပ်သော anime စီးရီးအဖြစ်သို့ကူးပြောင်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ 3ပြီလ ၃ ရက်တွင် TV Tokyo တွင်ပြသခဲ့သည်။ Crunchyroll သည်စီးရီး၏ Premiere တွင်တင်ဆက်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အောက်ပါဖြစ်စဉ်များ streaming ။ ထို့အပြင် Taira သည် Uchiha Sasuke no Sharinganhan ကိုရေးသားခဲ့သည်။ (October ちはサスケの写輪眼 Sas, Sasuke Uchiha ၏ Sharingan Legend) ကိုအောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးထိုမဂ္ဂဇင်းတွင်ပင်ဖြစ်ပြီး Sasuke ပါ ၀ င်သည်။
Boruto: Naruto Next Generations ဟုအမည်ပေးထားသောလစဉ်ဆက်တိုက်စီးရီးကိုဂျပန်နှင့်အင်္ဂလိပ်နှစ်ပတ်လည် Weekly Sh editionnen Jump ၌ ၂၀၁၆ အစောပိုင်းတွင် Mikio Ikemoto မှပုံဖော်ခဲ့ပြီး Kyksimoto ၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့်Ukyō Kodachi ရေးသားခဲ့သည်။ Ikemoto သည်မူလ Naruto စီးရီးတွင် Kishimoto ၏လက်ထောက်အကြီးအကဲဖြစ်ပြီး Kodachi သည် Boruto: Naruto the Movie ရုပ်ရှင်ပြဇာတ်ရုံတွင်သူ၏အရေးအသားမိတ်ဖက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လစဉ်စီးရီးများကိုကိရှီမိုတိုမှရေးပြီးပုံဖော်ထားသည့်တစ်ချက်တည်းဖြင့်ရှေ့ပြေးခဲ့သည်။ Shueisha မှ ၀ န်ထမ်းများကသူသည် Naruto ကိုနောက်ဆက်တွဲဆက်ရေးမလား Kishimoto ကိုမေးခဲ့သည်။ Kishimoto သည်ငြင်းဆိုခဲ့ပြီးသူ၏လက်ထောက်ဖြစ်သူ Mikio Ikemoto နှင့်စာရေးဆရာ Ukyo Kodachi တို့အား Naruto ၏နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် Boruto: Naruto Next Generations ရေးရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
Hayato Date မှရိုက်ကူးသော Studio Pierrot နှင့် TV Tokyo မှထုတ်လုပ်သော Naruto anime သည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၀၂ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး TV Tokyo တွင်ဖြစ်ရပ် ၂၂၀ ပြီးနောက် ၂၀၀၇ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်တွင်နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်စဉ် ၁၃၅ ကို manga ၏အပိုင်း ၁ မှလိုက်ဖက်သည်။ ကျန်တဲ့ ၈၅ ခုဟာမူရင်းဖြစ်ပြီး manga မပါတဲ့ plot element တွေကိုသုံးပါ။ Tetsuya Nishio သည် Naruto အတွက်ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်ဖြစ်ပြီး manga ကို anime စီးရီးအဖြစ်ပြောင်းလိုက်သောအခါဖြစ်သည်။ Kishimoto က Nishio ကိုဒီအခန်းကဏ္givenကိုပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ် ၂၀၀၉ Aprilပြီ ၂၉ ရက်မှ စ၍ မူလ Naruto anime သည်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့်ကြာသပတေးနေ့များ၌ (၂၀၀၉ စက်တင်ဘာ ၄ ရက်သတ္တပတ်အထိဗုဒ္ဓဟူးနေ့များသာပြောင်းသည်) ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို 2D နှင့် 3D အကျိုးသက်ရောက်မှုအသစ်များဖြင့် HD တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ပြီး Naruto: Shōnen Hen (Youth 篇, "လူငယ်ဗားရှင်း") အောက်တွင်ရှိသည်။ စီးရီးမှဖြစ်စဉ်များ VHS နှင့် DVD နှစ်ခုလုံးတွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးသေတ္တာများအဖြစ်စုဆောင်းထားသည်။
Viz သည် anime စီးရီးများကိုလိုင်စင်ရပြီးတိုင်းဒေသကြီး ၁ ဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်၏လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင်စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကာတွန်းကွန်ယက်၏ Toonami တွင်ဖြစ်ရပ် ၂၀၉ ခုဖြင့်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်များကိုလည်း SABC2(တောင်အာဖရိက)၊ YTV မှ Bionix (ကနေဒါ) နှင့် Jetix ၏ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) ပရိုဂရမ်လုပ်ကွက်များ၌လည်းထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးမတ်လ ၂၈ ရက်၊ DVD တွင် DVD ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၂၀၁၇၊ ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်တွင် Starz ကသူတို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှစ၍ ဗီဒီယိုအပေါ် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်စီးရီးဖြစ်စဉ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ပထမအတွဲ ၂၆ ခုတွင်ဇာတ်လမ်းတွဲလေးခုပါ ၀ င်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် DVD volumes များသည်ဇာတ်လမ်းတွဲငါးခုရှိသည်။ Uncut ထုတ်ဝေမှုများသည် DVD box အစုံအလင်ပါ ၀ င်ပြီး ၁၂-၁၅ ခုပါ ၀ င်သည့်ဇာတ်လမ်းများ၊ ဇာတ်လမ်းဒုတ်များအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ အမေရိကန်ထုတ်လွှင့်မှုတွင်အရက်၊ ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရိပ်လက္ခဏာနှင့်သွေးနှင့်သေခြင်းအသွင်အပြင်များကိုရံဖန်ရံခါတည်းဖြတ်ခဲ့သော်လည်းဒီဗီဒီထုတ်ဝေမှုများတွင်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ ဆင်ဆာလုပ်ထားသောမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာ Naruto နှင့် Sauske အကြားမတော်တဆအနမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည့်အကြောင်းအရာများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှည်လျားသောလမ်းကြောင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အခြားကွန်ယက်များသည်ပိုမိုသောပစ္စည်းများကိုဖြတ်တောက်သည်။ ဥပမာ Jetix သည်သွေး၊ အားကောင်းသောဘာသာစကားနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အတူဆင်ဆာလုပ်ထားသောမြင်ကွင်းများ။ ဒီစီးရီးကို Hulu, Joost, Crunchyroll တို့နှင့်လည်းလိုင်စင်ရရှိထားပြီး၊ မူရင်းဂျပန်အသံပုဒ်နှင့်အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးများဖြင့်အွန်လိုင်းအစီအစဉ်များကိုထုတ်လွှင့်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်တွင်ပြသသည့်ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲမှ စတင်၍ မူလ Naruto ရုပ်မြင်သံကြား anime စီးရီးများ၏ HD remaster version ကိုဂျပန်တီဗီတွင်ပြသမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Naruto: Shippuden (Naruto - ナトト - 疾風伝, Naruto Shippūden, စ။ "Naruto: Hurricane Chronicles") သည် Studio Pierrot မှတီထွင်ခဲ့ပြီး Hayato Date မှညွှန်ကြားထားသည်။ ၎င်းသည်မူလ Naruto anime ၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် manga အပိုင်း II နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်တီဗီတွင်ပြသခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်မတ်လ ၂၃ ရက်တွင်နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် TV Tokyo သည်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းသူများအားအင်တာနက်စီးဆင်းမှုမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စဉ်အသစ်များကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ လွှင့်ထုတ်လွှင့်သည့်ဇာတ်လမ်းတွဲများကိုဂျပန်နိုင်ငံဖြန့်ချိပြီးနောက်တစ်နာရီအတွင်းအွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးပါ ၀ င်သည်။ Viz သည်အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးဇာတ်လမ်းများကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင်၎င်း၏စီးရီးဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်လွှင့်တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်ဖြစ်ရပ်များအပြင်ဂျပန်မှဖြစ်စဉ်အသစ်များလည်းစတင်ခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင် Naruto ၏ English dub - Shippuden သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၈ မှ Disney XD တွင်အပတ်စဉ်ပြသခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်မှဇာတ်လမ်းတွဲ ၉၈ အထိဖြစ်သည်။ အပိုင်း ၉၉ မှ ၃၃၈ အရ anime streaming ၀ န်ဆောင်မှုတွင် Neon Alley ကိုပိတ်သိမ်းသည့်အထိပြသခဲ့သည်။ 4, 2016. Anime သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်မှ စတင်၍ Adult Swim's Toonami ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှစတင်၍ အနာဂတ်အတွက်ယနေ့ထုတ်လွှင့်သောထုတ်လွှင့်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။
ဒီစီးရီးကို Japan ရှိ Region2DVD မှာ disk တစ်ခုစီမှာဖြစ်စဉ်လေးခု၊ ငါးခုနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဇာတ်လမ်းကို arc ဖြင့်ဝေဖန် DVD ထုတ်လွှတ်လေးစီးရီးရှိပါတယ်။ သတ္တမမြောက် Naruto တွင်ပါဝင်သောအထူးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုရှိသည် - ဟာရီကိန်းဟုခေါ်သော Shippuden စုစည်းမှုဒီဗီဒီ။ "Konoha အကယ်ဒမီ" ရာဇဝင်များ။ Kakashi ရာဇဝင်ချုပ် - စစ်မြေပြင်၌ယောက်ျားလေးများ၏ဘဝ (Kakashi Gaiden ~ Senjō no Bōizu Raifu ~) ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၁၉ မှ ၁၂၀ ပါ Kakashi Hatake ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်ပတ်သက်သည်။
ပထမစီးရီး၏မြောက်အမေရိကဒီဗီဒီကို ၂၀၀၉၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက်တွင် ၁၂ ကြိမ်မြောက်အသံအနိမ့်အမြင့်မတိုင်မီပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ရပ် ၅၃ ခုသာလျှင်ဤပုံစံဖြင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်တွင်ပထမဆုံးရာသီမှ စတင်၍ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် ၂၀၁၀ ဇွန် ၁၄ ရက်တွင်ပထမဆုံး DVD စုဆောင်းမှုကိုထုတ်ဝေခဲ့သော Manga Entertainment မှထိုစီးရီးကိုလိုင်စင်ရခဲ့သည်။
Naruto ၏မူရင်းဗီဒီယိုကာတွန်း ၁၂ ခု (OVAs) ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
ကတ္တီပါနီလေးရွက် Clover ရှာပါ! (2003) ။ အဖွဲ့ ၇ ကို လိုက်၍ Konohamaru သည်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အလိုဆန္ဒပြည့်စုံစေသည့်အရွက်လေးညှပ်လေးကိုပြန်လည်ရယူရန်ကူညီသည်။
မစ်ရှင် - ရေတံခွန်ရွာကိုကာကွယ်ပါ။ (2004) ။ အဖွဲ့ ၇ သည် shinobi အားသူ၏ဇာတိမြို့သို့လိုက်ပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ဤနှင့်ယခင် OVA ကိုနောက်ပိုင်းတွင်ဩစတြေးလျရှိ Naruto Jump Festa Collection ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ DVD ၌ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ မစ်ရှင်၏အင်္ဂလိပ်နေရာချထားမှု - ရေတံခွန်ကျေးရွာကိုကာကွယ်ပါ။ Viz မှ ၂၀၀၇ မေလ ၂၂ ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Naruto - The Lost Story ဟူသောခေါင်းစဉ်အောက်တွင် DVD ဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Konoha နှစ်ပတ်လည်အားကစားပွဲတော်။ (၇) အဖွဲ့ ၇ အပါအ ၀ င် shinobi အုပ်စုများသည်အားကစားပြိုင်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံး Naruto ရုပ်ရှင်နှင့်အတူဖြန့်ချိဗီဒီယိုတို; မြောက်အမေရိကတွင်၎င်းသည်ပထမဆုံးရုပ်ရှင်၏ Deluxe Edition ဒီဗီဒီတွင်ပါဝင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တိုက်ပွဲ! Jonin VS Genin !! ခွဲခြားမှုမရှိဘဲခမ်းနားစွာ melee ပြိုင်ပွဲအစည်းအဝေး !! (၂၀၀၅) ပဉ္စမ Hokage Tsunade သည် Jonin (အဆင့်မြင့် Ninja) နှင့် Genin (low level Ninja) အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုကိုဖန်တီးသည်။ PlayStation2အတွက်ဂျပန်ထုတ် Naruto: Ultimate Ninja3ဗီဒီယိုဂိမ်းဖြင့်အပိုဆုပေးသည့် disk တစ်ခုတွင်ထုတ်ဝေသည်။
Shippū! "Konoha Gakuen" Den (၂၀၀၈) ။ အထက်တန်းကျောင်းတွင်သူတို့နေထိုင်စဉ် OVA သည် Naruto Uzumaki နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနောက်သို့လိုက်သည်။
Naruto ကို - Cross Roads (2010) ။ Zabuza, Haku တို့နှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက် Team7ကိုအာရုံစိုက်သည်။
Naruto, The Genie နှင့် The Three Wishes !! (2010) ။ Team7ကမ်းခြေမှာရှိနေစဉ် Naruto ဟာပုလင်းတစ်လုံးကိုတွေ့ပြီးဆန္ဒ (၃) ခုပေးတဲ့ Genie ကိုရှာတွေ့တယ်။
UT ကို (2011) x ကို Naruto ကို။ Sasuke က Naruto ကိုအနိုင်ယူပြီးသေပြီဟုကြေငြာသည်။ တိုက်ခိုက်ရေးမှ ဦး ဆောင်ဖြစ်ရပ်များ flashback မှာပြနေကြသည်။
မီးလောင်သောချောင်စာမေးပွဲ! Konohamaru vs. Naruto ကို! (2011) ။ Naruto နှင့် Konohamaru တို့သည် Chunin စာမေးပွဲတွင်ပါ ၀ င်သူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကန့်သတ်နှင့်အတူစစ်တိုက်။
Madara Uchiha vs. Hashirama Senju (၂၀၁၂) ။ တိုဘီသည် Konoha ၏မူလအစကိုပြောပြသည်။ အစပိုင်းတွင် Ninja သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မျိုးနွယ်စုများအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအင်အားအကောင်းဆုံးသောမျိုးနွယ်စုနှစ်ခုမှာ Hashirama ဦး ဆောင်သော Senju နှင့် Madara ဦး ဆောင်သော Uchiha တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို PlayStation3နှင့် Xbox 360 အတွက် Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Generation ဗီဒီယိုဂိမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
Naruto Shippūden: Sunny Side Battle !!! (2014) ။ Sasuke ဟာသူ့အစ်ကို Itachi ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အထိမနက်စာစားဖို့အကြိမ်ကြိမ်အိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။
The Day Naruto သည် Hokage ဖြစ်လာသည် (2016) ။ Naruto Uzumaki သည်သတ္တမမြောက် Hokage တရားဝင်ဖြစ်သော်လည်းအခမ်းအနားသို့မတက်ရောက်ပါ။
အဆိုပါစီးရီးရုပ်ရှင်တကျိပ်တပါးအဆင်ပြေအောင်ခဲ့သည်; ပထမသုံးခုသည်ပထမ ဦး ဆုံး anime စီးရီးနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးကျန်ရှစ်ခုသည်ဒုတိယစီးရီးများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အောက်ပါစာရင်းမှရက်စွဲများသည်မူရင်းဂျပန်လွှတ်ပေးရေးအတွက်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်အားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်၊ များသောအားဖြင့်နောက်သုံးနှစ်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။
Snow Land ၏ Ninja Clash (၂၀၀၄) ။ မင်းသမီး Fuun ရုပ်ရှင်အသစ်ရိုက်ကူးစဉ်ကအဖွဲ့ ၇ သည် Snow Land သို့သွားပြီးသရုပ်ဆောင်များကိုကာကွယ်သည်။ စတုတ္ထမူရင်းဗီဒီယိုကာတွန်း၊ Konoha နှစ်ပတ်လည်အားကစားပွဲတော်ကိုဂျပန်ရုပ်ရှင်ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူထည့်သွင်းခဲ့သည်။
Gelel of the Stone of Legend (၂၀၀၅) ။ Naruto၊ Shikamaru နှင့် Sakura တို့သည် Sunaga ကျေးရွာနှင့်ကြီးမားသောသံချပ်ကာစစ်သည်များအကြားစစ်ပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် Ninja အဖွဲ့သို့သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။ Legend of the Stone of Gelel သည်ယခင်အမေရိကန်နှင့်မတူဘဲအမေရိကန်၌ပြဇာတ်ရုံမပြခဲ့သော်လည်းတိုက်ရိုက်အစားဗွီဒီယိုဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
လခြမ်းမွန်းနိုင်ငံတော်၏အုပ်ထိန်းသူများ (၂၀၀၆) ။ Naruto၊ Sakura, Lee နှင့် Kakashi တို့သည်အနာဂတ်တွင်လကမ္ဘာ၏မင်းသား Hikaru Tsuki ကိုကာကွယ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
Naruto Shippuden ရုပ်ရှင် (၂၀၀၇) ။ Naruto သည်သူ၏သေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောရူပါရုံကိုစတင်ခံစားခဲ့ရသောဘုန်းတော်ကြီး Shion အားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ဆောင်ရွက်သည်။
Naruto Shippuden ရုပ်ရှင်: Bonds (၂၀၀၈) ။ Sky Country မှ Ninja များသည် Konoha ကိုတိုက်ခိုက်သည့်အခါ Naruto နှင့် Sasuke တို့ပူးပေါင်းကြသည်။
Naruto Shippuden ရုပ်ရှင်: The Will of Fire (၂၀၀၉) ။ Team7သည် Kakashi အားကမ္ဘာ့စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရန်မိမိကိုယ်ကိုမစွန့်လွှတ်ရန်တားဆီးသည်။
Naruto Shippuden ရုပ်ရှင်: The Lost Tower (၂၀၁၀) ။ Naruto ကိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ လောက်ကသူဟာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ ninja ကိုဖမ်းယူဖို့ဆန်းကြယ်တဲ့မျှော်စင်ကိုစူးစမ်းရှာဖွေရင်းအချိန်ဇယားမှာအသက်ရှင်နေတဲ့သူ့အဖေ Fourth Hokage ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Naruto ရုပ်ရှင်: သွေးထောင် (2011) ။ Naruto သည် Raikage ကိုသတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းအတွက်ပုံသွင်းခံရသည်။ သူထောင်ထဲမှထွက်ရန်ကြိုးစားသောအခါသူသည်၎င်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။
Ninja သို့သွားသောလမ်း - Naruto the Movie (၂၀၁၂) ။ Naruto နှင့် Sakura ကို Tobi မှအခြားစကြဝuniverseာတစ်ခုသို့ပို့ဆောင်။ အပေါင်းအသင်းနှင့်မိဘတို့၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ အဆိုပါဇာတ်လမ်းစီစဉ်ခြင်းနှင့်ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းများ Masashi Kishimoto ကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
နောက်ဆုံး - Naruto the Movie (၂၀၁၄) ။ Naruto နှင့်သူ၏အဖော်များသည်လကိုကမ္ဘာမြေနှင့်တိုက်မိခြင်းမှတားဆီးရန်ကြိုးစားသည်။ ဇာတ်ကားသည်ဒဏ္myာရီဆိုင်ရာဒဏ္myာရီများနှင့် Naruto နှင့် Hinata တို့၏အချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ နိဂုံးချုပ်ထားသည်။ ဇာတ်လမ်းနှင့်ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းများကို Masashi Kishimoto မှတီထွင်ခဲ့သည်၊ သူသည်ဇာတ်လမ်းကြီးကြပ်သူလည်းဖြစ်သည်။
Boruto - Naruto the Movie (၂၀၁၅) ။ ဒီရုပ်ရှင်မှာအဓိကဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ကလေးများ၊ အဓိကအားဖြင့် Boruto Uzumaki, သူ့ဖခင်၏ပြိုင်ဘက် Sasuke ကိုကျော်ပြီးကျော်ဖြတ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေသောကလေးငယ်များကိုအဓိကထားဖော်ပြထားသည်။ ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်းနှင့်ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းများကို Masashi Kishimoto မှတီထွင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးအဖြစ်လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် Lionsgate သည်သူ၏ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ Arad Productions မှ Avi Arad နှင့်အတူ live-action Naruto ကိုတီထွင်နေပြီး Michael Gracey နှင့် Erik Feig၊ Geoff Shaveitz နှင့် Kelly O'Malley တို့မှထုတ်လုပ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင်သူသည်ရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကူညီရန်တောင်းဆိုခံရကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Masatoshi Kusakabe ရေးသားသောပထမကိုး Naruto အလင်းဝတ္ထု ၂၂ ခုကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှပထမနှစ်ခုကိုမြောက်အမေရိကရှိအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ပထမဆုံးပြင်ဆင်ထားသောဝတ္ထုဖြစ်သော Naruto: Innocent Heart, Demonic Blood (2002) သည်အဖွဲ့ ၇ မစ်ရှင်အားပြန်လည်သိမ်းဆည်းပြီး Zabuza နှင့် Haku တို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒုတိယ၊ Naruto - မစ်ရှင်။ ရေတံခွန်ရွာကိုကာကွယ်ပါ။ (2003) သည် anime ၏ဒုတိယ OVA ကိုအခြေခံသည်။ Viz သည် Tracey West မှရေးသားထားသောအခန်း ၁၆ ခန်းကို manga မှသရုပ်ဖော်ပုံများဖြင့်လည်းထုတ်ဝေခဲ့သည်။ စီးရီးများနှင့်မတူသည်မှာဤစာအုပ်များသည်အသက် ၇ နှစ်မှဆယ်နှစ်အထိကလေးများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
မူရင်းဝတ္ထု (၁၃) ခုကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်တွေ့မြင်ရသည် ယင်းတို့အနက်မှ ၁၁ ခုသည်စီးရီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျန်နှစ်ခုမှာမူဆက်နွယ်မှုမရှိသောလွတ်လပ်သောဝတ္ထုများဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးသောလွတ်လပ်သောဝတ္ထုဖြစ်သော Naruto: Tales ofaGutsy Ninja (2009) သည် Naruto ၏သခင် Jiraiya ရေးသားထားသောစကြာ ၀ inာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Naruto ၏ namesake အဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့သော Naruto Musasabi အမည်ရှိစိတ်ကူးယဉ် Shinobi ၏အဖြစ်အပျက်များဖြစ်သည်။ အခြားလွတ်လပ်သောဝတ္ထုဖြစ်သော Naruto Jinraiden: The Day the Wolf Howled (2012) သည် Sasuke ၏ Itachi နှင့်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမကြာမီတွင်ဖြစ်သည်။
ဝတ္ထုနှစ်ခုပါ ၀ င်သည့် Itachi Shinden နှင့်ဝတ္ထုတစ်ခုတည်း Sasuke Shinden တို့သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ပေါ်ထွက်လာပြီး၎င်းတို့ကို Naruto ရှိ anime arcs အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ 2016 ခုနှစ်တွင် Shippuden, Naruto Shippūden: Itachi Shinden-hen: Hikari to Yami to Book အသီးသီး Sunrise ၏။ Hiden သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေသောဝတ္ထုခြောက်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး manga အဆုံးသတ်ပြီးနောက်ဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုး၏ပုံပြင်များကိုလေ့လာထားသည်။
Toshio Masuda သည် Naruto တေးသံများကိုရေးစပ်။ စီစဉ်ခဲ့သည်။ Naruto Original Soundtrack ကို2003ပြီလ ၃ ရက်၊ ၂၀၀၃ တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး anime ၏ပထမဆုံးရာသီတွင်အသုံးပြုသောပုဒ် ၂၂ ပုဒ်ပါဝင်သည်။ ၎င်းနောက် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင်ပုဒ် ၁၉ ပုဒ်ပါဝင်သော Naruto Original Soundtrack II ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ တတိယမြောက် Naruto Original Soundtrack III ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ 27ပြီလ ၂၇ ရက်တွင်ပုဒ်မ ၂၃ ပုဒ်ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စီးရီး၏အဖွင့်နှင့်အဆုံးသတ်ခေါင်းစဉ်များပါ ၀ င်သောတေးသံနှစ်ကွင်းဖြစ်သော Naruto: Best Hit Collection နှင့် Naruto: Best Hit Collection II အမည်ရှိသီချင်း ၂ ပုဒ်ကိုနိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၄ နှင့်ဩဂုတ် ၂၊ ၂၀၀၆ တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သောအလွန်အကောင်းဆုံး Hit Collection Instrumental Version - ရော့ခ်ရှိ Naruto ဟုခေါ်သည့် CD တစ်ချပ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ် anime စီးရီးများမှရုပ်ရှင်သုံးခုအတွက်တေးသံများကိုသူတို့ထုတ်လုပ်သည့်နေ့ရက်များနီးပါးတွင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင် Naruto Shōnen Hen မှအကြောင်းအရာများကိုစုဆောင်းသောစီဒီတစ်ချပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ CD စီးရီးအမျိုးမျိုးကိုအသံသရုပ်ဆောင်များနှင့်မူရင်းဇာတ်လမ်းများဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
Naruto ၏တေးသံများကို Shippuden ကို Yasuharu Takanashi မှထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၄ င်းတို့ကို Naruto Shipp Originalden Original Soundtrack I, II နှင့် III ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၉ နှင့် ၂၀၁၆ တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေသော Naruto All Stars သည်မူရင်း Naruto သီချင်း ၁၀ ပုဒ်ပါဝင်ပြီးဇာတ်လမ်းတွဲမှဇာတ်ကောင်များကသီဆို။ သီဆိုထားသည်။ Anime စီးရီးနှစ်ခုမှအကြောင်းအရာဆယ်ခုကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ပြသခဲ့သည့် Naruto Super Hits 2006-2008 မှ DVD box တွင်စုဆောင်းရရှိခဲ့သည်။ Shippuden ရုပ်ရှင်၏တေးသံများကိုလည်းထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးရရှိနိုင်ခဲ့သည်။ အခန်း၏နောက်ဆုံးအပိုင်း သည် Aniplex နှင့် CD တွင်ထည့်သွင်းရန် Naruto နှင့် Naruto Shippuden themes များအားလုံးကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိရန်ရှိသည်။
Naruto ဗီဒီယိုဂိမ်းများကို Nintendo, Sony နှင့် Microsoft တို့မှအမျိုးမျိုးသော console များပေါ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်ဂိမ်းများကိုတိုက်ခိုက်နေကြပြီးကစားသမားသည် Naruto မှဇာတ်ကောင်တစ် ဦး အားတိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်သောကစားနည်းဖြစ်သည်။ ကစားသမားသည်သူတို့၏ AI ဇာတ်ကောင်ကိုဂိမ်း AI မှထိန်းချုပ်သောအခြားဇာတ်ကောင်နှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာအခြေခံတိုက်ခိုက်မှုများကို အသုံးပြု၍ ပြိုင်ဘက်၏ကျန်းမာရေးကိုသုညသို့လျှော့ချရန်နှင့် Naruto anime သို့မဟုတ် manga တွင်သူတို့အသုံးပြုသောနည်းစနစ်များမှရရှိသောထူးခြားသောအထူးနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး Naruto ဗီဒီယိုဂိမ်းသည် Naruto: Konoha Ninpōchōဖြစ်ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် WonderSwan အရောင်အတွက် Japan တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Naruto ဗီဒီယိုဂိမ်းအများစုကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်သာထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပတွင်ပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာသည့်ဂိမ်းများမှာ Naruto: Gekitou Ninja Taisen စီးရီးနှင့် Naruto: Saikyou Ninja Daikesshu စီးရီး၊ မြောက်အမေရိကတွင် Naruto - Clash of Ninja နှင့် Naruto: Ninja Council ဟူသောခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် Namco Bandai သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ Naruto ဂိမ်း ၁၀ သန်းရောင်းချခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Naruto စီးရီးကိုအခြေခံသည့်တရားဝင်စာအုပ်သုံးအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ပထမအကြိမ် Art Collection: Uzumaki, နှင့် Illustration Collection: Naruto တို့ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၀၄ နှင့် ၂၀၀၉ တွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးမြောက်အမေရိကထုတ်ဝေမှုများကို ၂၀၀၇ နှင့် ၂၀၁၀ အသီးသီးအသီးသီးတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ တတိယပန်းချီပုံဥပမာစုဆောင်းခြင်း - Naruto Uzumaki ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Japan တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးထိုနှစ်တွင်မြောက်အမေရိက၌လည်းကောင်း၊ ၎င်းသည်မူလက Shonen Jump ရုပ်ပြောင်တွင်အနုပညာလက်ရာများပါရှိသည်။ Kishimoto မှသူ၏အကြိုက်ဆုံးအနုပညာလက်ရာများအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ရေးသားခြင်းမှ လွဲ၍ ၎င်းတွင်စာသားမရှိပါ။ Paint Jump: Art of Naruto ဟုခေါ်သောအပြန်အလှန်အရောင်အသွေးစုံသည့်စာအုပ်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Masashi Kishimoto မှ Naruto Exhibition Official Book ည့်စာအုပ်စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Naruto အနုပညာပြပွဲသို့တက်ရောက်သူများအား,ပြီ ၂၅ ရက်၊
စတုတ္ထတရားဝင်ဒေတာစာအုပ်မှတဆင့်ပထမ ဦး ဆုံးတရားဝင်ဒေတာစာအုပ်အမည်ရှိလမ်းညွှန်စာအုပ်လေးထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ပထမနှစ်ခုသည် manga ၏အပိုင်း ၁ ကိုဖုံးအုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၂ နှင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တတိယနှင့်စတုတ္ထအတွဲများသည် ၂၀၀၈ နှင့် ၂၀၁၄ တွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။ ဤစာအုပ်များတွင် Kishimoto မှဇာတ်ကောင်များ၊ Jutsu လမ်းညွှန်များနှင့်မူကြမ်းများပါဝင်သည်။ Anime အတွက် Naruto Anime Profiles လို့ခေါ်တဲ့လမ်းညွှန်စာအုပ်တွေထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဤစာအုပ်များတွင် anime ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဇာတ်ကောင်များ၏ဒီဇိုင်းများကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။ လျှို့ဝှက်: Warriors Official Fanbook မှစာပေများကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ စီးရီး၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ် manga ပန်ကာစာအုပ်ကိုအခြား manga အနုပညာရှင်များ၏ Naruto Uzumaki ၏သရုပ်ဖော်ပုံများဖြစ်သော Kishimoto ၏တစ်ချက်တည်းကာရာကူရီအမည်ဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နှင့် Kishimoto နှင့် Yoshihiro Togashi အကြားအင်တာဗျူး။
Bandai မှထုတ်လုပ်သော Naruto Collectible Card Game ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်မြောက်အမေရိကတွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ကစားသမားနှစ် ဦး နှင့်စိတ်ကြိုက်ကဒ်ပြား ၅၀ ရှိသောကုန်းပတ်တစ်ခုနှင့်ဂိမ်းဖျာတစ်ခုအကြားကစားသည်။ အနိုင်ရလျှင်ကစားသမားတစ် ဦး သည်ဂိမ်းတွင်သူတို့၏လုပ်ရပ်များမှတစ်ဆင့်“ စစ်ဆုလာဘ်” ဆယ်ခုရရှိမည်သို့မဟုတ်အခြားကစားသမားကိုကုန်းပတ်ကုန်ခန်းစေရမည်။ ကဒ်များကို“ series” ဟုခေါ်သောအမည်ရှိအစုံများတွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးကဒ်ပြား ၅၀ ကြိုတင်တည်ဆောက်ထားသည့်သေတ္တာအစုလေးခုဖြင့်ပုံစံထုတ်ခဲ့သည်။ set တစ်ခုစီတွင် starter deck၊ game ဖျာ၊ turn-counter နှင့် stainless steel တစ်ခုဖြစ်သော Ninja Blade Coin တို့ပါ ၀ င်သည်။ အပိုကဒ်ပြားများကို ၁၀ ကဒ် booster အထုပ်များနှင့်ကုန်းပတ်အစုံများတွင်ရရှိနိုင်သည်။ လက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင်ရောင်းချသောလေးသေတ္တာအစုံတစ်ခုစီကိုရနိုင်သည်။ အစုတစ်ခုစီအတွက်ကဒ်များကိုမြှင့်တင်ရေးအထုပ်များနှင့်သတ္တုသေတ္တာတစ်ခုတွင်သီးသန့်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကဒ်များပါရှိသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ထူးခြားသောကတ်ပြား ၄၁၇ ခုနှင့် ၁၇ ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်Augustဂုတ်လတွင်မြောက်အမေရိက၌ဤစီးရီးဆယ်ခုကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်သန်း ၁၄၀ နှင့်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ၉၅ သန်းအပါအ ၀ င် manga သည်တစ်ကမ္ဘာလုံး၌ ၂၃၅ သန်းရောင်းချခဲ့ရပြီး၎င်းသည်သမိုင်းတွင်တတိယအရောင်းရဆုံး manga စီးရီးဖြစ်သည်။ ရောင်းအားထက်ဝက်ကျော်သည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရှိပြီးကျန် ၃၅ နိုင်ငံမှရောင်းချမှုများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြောက်အမေရိကထုတ်ဝေသူ Viz Media ၏အရောင်းရဆုံး manga စီးရီးတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သူတို့၏စီးရီးဘာသာပြန်ကျမ်းများကို USA Today တွင်ဖော်ပြထားပြီး The New York Times အရောင်းရဆုံးစာရင်းများအကြိမ်ကြိမ်စာရင်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီး manga ၏အတွဲခုနစ်သည်ဂရပ်ဖစ်ဝတ္ထုအတွက် Quill Award ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွက် Teacher Librarian ၏အကြံပြုစာရင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ နှင့်ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ဂျာနယ်က၎င်းကိုကျောင်းစာကြည့်တိုက်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော manga အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မတ်လတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေသော USA Today Booklist တွင် manga ၏အတွဲ ၂၈ သည် ၁၇ ခုမြောက်နေရာဖြစ်ခဲ့ပြီး Fruits Basket ကကျင်းပသော manga အတွက်စံချိန်ထက် ၂ နေရာသာရှိသည်။ ဤအသံပမာဏသည်နှစ်များအတွင်း manga ၏ပထမဆုံးပွဲ ဦး ထွက်သီတင်းပတ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်အရောင်းရဆုံး manga ပမာဏနှင့်မြောက်အမေရိကတွင်ဒုတိယအရောင်းရဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေသူ Viz သည်စာဖတ်သူများ၏သစ္စာရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးသည်။ ၄ င်းတို့သည်ပမာဏကို ၄၀ ကျော်ကျော်သွားသည်နှင့်အမျှ manga ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဆက်လက်ဝယ်ယူနေကြသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလတွင်အတွဲ ၁၄ သည် Viz the Manga Trade Paperback of Year Gem Award ကို Diamond Comic Distributors မှရရှိခဲ့သည်။ ဒီ manga ကို ၂၀၀၉ Comics Awards မှ Nickelodeon မဂ္ဂဇင်းတွင် Favorite Manga စီးရီးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Asahi Shimbun က Naruto သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Tezuka Osamu ယဉ်ကျေးမှုဆုအတွက်လျာထားခံရသူကိုး ဦး အနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ နောက်လတွင် Kishimoto သည်ဂျပန်အစိုးရယဉ်ကျေးမှုရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာန၏စီးရီးအတွက်တစ်နှစ်တာ၏လူသစ်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစား၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအနုပညာထောက်ခံချက်ဆုများ။ Naruto ၏အောင်မြင်မှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် Kishimoto က Naruto Collector ဆောင်းရာသီ 2007/2008 တွင်ပြောကြားခဲ့သည်မှာသူသည်အမေရိကန်ပရိသတ်များ ninja ကိုလက်ခံပြီးနားလည်ကြောင်း ၀ မ်းသာကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အမေရိကန်ပရိသတ်သည်အရသာကောင်းကြောင်းပြသသည်။ ယခင်ကသူတို့နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောအရာတစ်ခုခု "
Naruto Shippuden ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာဂျပန်နိုင်ငံတွင်ကြည့်ရှုခဲ့ဖူးသမျှအများဆုံးစီးရီးများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ Viz မှပထမဆုံးထုတ်ယူသော DVD စုစည်းမှုသည်အကောင်းဆုံးအထုပ်ဒီဇိုင်းအတွက် American Anime Awards မှအမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံရသည်။
လေ့လာသူများကတိုက်ပွဲမြင်ကွင်းများနှင့်ကြံစည်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြားမျှတမှုရှိကြောင်းမှတ်ချက်ပေးသည်။ IGN မှ E. E. Sparrow နှင့် Anime News Network (ANN) မှ Casey Brienza မှရလဒ်သည်ခိုင်မာသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ကြောင်းခံစားခဲ့ရသော်လည်း ANN အတွက်ရေးသားနေသူ Carl Kimlinger ကတိုက်ပွဲအလွန်နှေးကွေးသောတိုက်ပွဲများလွန်းသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Kimlinger သည်ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးတိုက်ပွဲမြင်ကွင်းများသူတို့ကိုယ်သူတို့ထောက်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Rik Spanjers ထံမှအပြုသဘောဆောင်သည့်မှတ်ချက်များကိုသာပေးခဲ့သည်၊ သူသည်မြင်ကွင်းများ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည် Kishimoto ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဖော်ပြသည့်စွမ်းရည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Manga Life အတွက်ရေးသားသော Javier Lugo ကအနုပညာလက်ရာများကိုသူအံ့ဩလောက်ဖွယ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောသူဖော်ပြသည့်ဇာတ်လမ်းအတွက်မှန်ကန်ကြောင်းဖော်ပြရန်သဘောတူခဲ့သည်။
Neo မှ Anime နှင့် manga မဂ္ဂဇင်းက Naruto ၏ဇာတ်ကောင်ကို irksome ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်စီးရီး၏“ စွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းစေသောနီးစပ်မှု” သည်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏အရည်အသွေးကြောင့်ဖြစ်သဖြင့် Briana Lawrence ၏ထင်မြင်ချက်အရဇာတ်ကောင်များ၏ကြီးထွားမှုသည်အပိုင်း (၂) ကိုအရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး ခံစားရစေသည် ။ အတွဲ ၂၈ ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် Brienza သည်အပိုင်း II ၏ဇာတ်လမ်းနှင့်စရိုက်လက္ခဏာများကိုလည်းချီးကျူးခဲ့သည်။
တိုကျို Polytechnic တက္ကသိုလ် manga ဌာနမှပါမောက္ခတစ် ဦး ဖြစ်သူ G the Itōသည်စီးရီး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် Dragon Ball ၏ manga နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် manga နှစ်ခုလုံးသည်ဇာတ်ကောင်များ၏ကိုယ်ခံပညာကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်သုံးဖက်မြင်ကိုယ်ခန္ဓာလှုပ်ရှားမှုများကိုသရုပ်ဖော်ထားသည်။ တိုက်ပွဲများအတွင်းစာဖတ်သူများသည် Naruto ရှိဇာတ်ကောင်များနှင့်စာရင်စာဖတ်သူများအားသူတို့၏အတွင်းပိုင်း monologue မှတဆင့်စာနာတတ်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲသည် Scott Pilgrim vs. The World အပေါ်ဒါရိုက်တာ Edgar Wright နှင့်အတူရုပ်ရှင်အပေါ်ဩဇာသက်ရောက်ခဲ့ပြီးသူသည် manga တွင်“ လူသတ်သမားလှုပ်ရှားမှု” ရှိသည့်အခါမည်သည့်နည်းစနစ်ကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းနောက်ခံ၏နောက်ကွယ်တွင်သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ မန်ဂါးအဆုံးသတ်သွားသောအခါမဂ္ဂဇင်းမှစာရေးဆရာများသည်ကီရှီမိုတို၏လုပ်ဆောင်မှုကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။
IGN ၏ထိပ်ဆုံး ၁၀၀ ကာတွန်းစီးရီးတွင် Naruto anime သည် ၃၈ ခုမြောက်အကောင်းဆုံးကာတွန်းပြသမှုအဖြစ်စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ဂျပန်ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက် TV Asahi သည် Naruto ၁၇ နေရာတွင်တစ်နိုင်ငံလုံးစစ်တမ်းကောက်ယူမှုအပေါ် အခြေခံ၍ လူကြိုက်များသောစစ်တမ်းတစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ The New York Times မှ Mike Hale ကစီးရီးသည်ကလေးများအတွက်ရည်ရွယ်သည့်အမေရိကန်ကာတွန်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကာတွန်းသည် T.H.E.M. ထံမှဝေဖန်မှုအချို့ရရှိခဲ့သည်။ Anime သုံးသပ်ချက်ဝေဖန်သူများ: Christina Carpenter သည် Kishimoto ၏အနုပညာစတိုင်ကိုကာတွန်းကားအဖြစ်သို့ပြန်ဆိုထားခြင်းမရှိဟုခံစားခဲ့ရပြီး Derrick Tucker သည်လည်းအပျက်သဘောဆောင်သော်ငြားလည်းသူတို့၏အကောင်းဆုံးပုံရိပ်များမှာ“ ကျန်ရှိနေသည်မှာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ manga ကဲ့သို့ပင် ANN Theron of Martin Theron ကဲ့သို့သောအချို့သုံးသပ်သူများက Tucker နှင့်အတူရန်ပွဲမြင်ကွင်းများများစွာရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ Justin Rich ကတိုက်ပွဲမြင်ကွင်းများသည်ပြသခြင်း၏အရေးအကြီးဆုံးနှင့်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။ သူမကဇာတ်ကောင်များကိုအပြုသဘောဖြင့်မှတ်ချက်ပေးခဲ့သော်လည်းသူမအများစုမှာမျှတမှုမရှိဟုခံစားခဲ့ရသည်။
Naruto - Activeanime မှ David C. Jones မှ Shippuden ကိုကောင်းစွာပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ animation သည်တိုးတက်လာသည်ဟုမှတ်ချက်ပေးသည်။ ANN သည်စီးရီးသည်ပထမဆုံး anime စီးရီးများထက် ပို၍ လေးနက်သောအသံနှင့်ဟာသနှင့်ဒရာမာအကြားပိုမိုမျှတမှုရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အဓိကကြံစည်မှုကနေပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ digressions အတူ။ ပထမဖြစ်စဉ်များအတွက်အရှိန်အဟုန်ကိုနှေးကွေးသည်ဟုဝေဖန်ခဲ့ကြသော်လည်းဇာတ်ကောင်များအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုသည်အပြုသဘောဆောင်သည့်မှတ်ချက်များကိုရရှိခဲ့သည် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်တိုင်းမ်သတင်းစာအတွက်စာရေးဆရာ Charles Solomon သည် Shippuden အားသူ၏ထိပ်ဆုံး ၁၀ တွင်အကောင်းဆုံးတတိယနေရာ၌ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Guinness World Records Gamer's Edition ၏စာဖတ်သူများသည် Naruto အားအချိန်တိုင်း၏ ၂၉ ကြိမ်မြောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းဇာတ်ကောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
Amy Plumb က Kishimoto သည် Naruto ရှိဂျပန်ဒဏ္myာရီကိုရည်ညွှန်းသည်ကိုထပ်မံထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုဆိုသည်။ ကိရှီမိုတိုသည်သူ၏စာဖတ်သူများသည်ကိုးကားချက်များကို decode လုပ်ရန်မျှော်လင့်ထားပြီး၎င်းသည်တိုက်ရိုက်ရှင်းလင်းချက်ကိုရှောင်ရှားရန်ခွင့်ပြုသည်။ သာဓကတစ်ခုမှာ Itachi ဖြစ်ပြီး Shinto နတ်ဘုရားများအမည်ရှိ Ninja နည်းစနစ်သုံးခု - Tsukiyomi, Amaterasu နှင့် Susano-o ။ Plumb သည် Sasuke ၏မျိုးနွယ်စု၏ Heraldic သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပြီး uchiwa ဟုလူသိများသောပန်ကာကိုလည်းရည်ညွှန်းသည်။ ထိုပရိသတ်များသည်ဂျပန်တို့၏ဒဏ္inာရီတွင်မကောင်းမှုကိုမှုတ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသည်။ Sasuke သည်စီးရီးနှောင်းပိုင်းနှောင်းပိုင်းတွင်သူသည် Nuto-Tailed Fox ၏ Naruto အပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကို "ဖယ်ထုတ်နိုင်စွမ်း" ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မြေခွေး (kitsune tsuki) သည်ဂျပန်ဒဏ္inာရီတွင်လှည့်စားသူများဖြစ်ပြီးအချို့ဇာတ်လမ်းများတွင်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလွှဲပြောင်းယူသည်၊ Naruto တွင်တံဆိပ်ခတ်ထားသည့် Nine-Tail နှင့်တူညီသည့်အချက်များနှင့် Naruto သည်ပြောင်မြောက်သောစကားများကို Plumb comments ။
ခရစ္စတိုဖာအေဘွန်းက Naruto ဇာတ်လမ်းတွင်ရိုးရာကွန်ဖြူးရှပ်တန်ဖိုးများပါ ၀ င်ကြောင်း၊ Naruto နှင့် Bleach ကဲ့သို့သော manga ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောကျောင်းသားများသည်၎င်းသည်၎င်း၏စိတ္တဇအတွေးအခေါ်များကိုလေ့လာခြင်းထက်ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူမည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ Norman Melchor Robles Jr. သည်အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်အပြုသဘောဆောင်သောတန်ဖိုးများနှင့်ဆက်နွှယ်နေသောဇာတ်ညွှန်းတွင်ပါသောစကားလုံးများကိုရေတွက်ခြင်းအားဖြင့် Naruto ရှိအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအတွေးအခေါ်များကိုပုံဖော်ခြင်းကိုအကဲဖြတ်သည်။ သူကတံဆိပ်တပ်ထားသောစကားလုံးများ၏သေးငယ်သောအများစုသည်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသော်လည်းအကြမ်းဖက်မှုကိုပုံဖော်ခြင်းသည်ဇာတ်ကောင်များဘက်မှအပြုသဘောဆောင်သောနည်းဗျူဟာများမှအကြမ်းဖက်မှုကိုမည်သို့ကျော်လွှားနိုင်ကြောင်းပြသရန်စီစဉ်ထားပုံရသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ Sheuo Hui Gan ကဒီစီးရီးကိုရိုးရာကျင့် ၀ တ်စံနှုန်းများရှိသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ သူမသည် Naruto ကိုကျော်လွှားနိုင်သည့် Naruto တွင်သူမ၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းခြင်း၏ကုသမှုကို Akira နှင့် Neon Genesis Evangelion ရှိကင်းကွာခြင်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။
Naruto ကိုဝေဖန်သူများစွာကလာမယ့်အသက်အရွယ်ဇာတ်လမ်းအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ စိတ်ပညာရှင်လောရင့်စီ။ ရူဘင်ကဇာတ်လမ်းဇာတ်လမ်းများသည်ချစ်ရသူများပျောက်ဆုံးသွားသော၊ သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများကိုရှာဖွေရန်အခက်အခဲရှိသောမည်သည့်အသက်အရွယ်မရွေးစာဖတ်သူများအားစိတ်ဝင်စားစေလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုသည်။ ယူကူရီဖူဂျီမိုတို၏အမြင်တွင်ဇာတ်ကောင်များရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှသူတို့ကိုကြီးပြင်း။ သင်ကြားပေးသောအရွယ်ရောက်သူများကိုလေးစားမှုပြကြသည်၊ ၎င်းသည် One Piece နှင့် Air Gear ကဲ့သို့သောအချိန်ကာလ၏အခြား manga များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Rik Spanjers သည် Sasuke (အထီးကျန်သူ) နှင့် Naruto (အကောင်းမြင်သမား) အကြားခြားနားချက်ကိုဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်မြင်သည် Sasuke တစ်ယောက်တည်းရှိနေပြီးလက်စားချေလိုစိတ်ပြင်းပြနေချိန်မှာတော့ကာကွယ်ပါ Omote Tomoyuki ကဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ Naruto ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကြားမှာကာတွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် Naruto ကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သို့အရွယ်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှရုပ်ပြဒြပ်စင်များသိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ Shinen Jump သည် Gintama နှင့် Reborn ကဲ့သို့သောလူရွှင်တော်များသယ်ဆောင်လာသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ Tomoyuki ၏အမြင်တွင်၎င်းသည်အလေးပေးပြောင်းလဲမှု၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Naruto သည်“ နောက်တဖန်ရယ်မောခြင်းကိုမပေးရ။ ”
ဖူဂျီမိုတိုကဤဇာတ်လမ်းသည်ရိုးရာအစဉ်အလာအရကျားမအခန်းကဏ္ has များရှိသည်ဟုဆိုထားသည်။ “ [... ] ယင်း၏ကိုယ်စားပြုချက်များကအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Ninja အကယ်ဒမီရှိမိန်းကလေးများသည်ကန ဦး ယောက်ျားများထက်သာလွန်သည်။ Fujimoto မှဤအချက်သည် Sakura ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေကြောင်းထောက်ပြပြီးယခုသူသည် Naruto ထက်ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများအခန်းကဏ္ on အပေါ် အခြေခံ၍ အက္ခရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါထပ်တူပုံစံပုံစံများကိုထပ်မံအသုံးပြုသည်။ ဥပမာ - Tsunade၊ ရင်သားကြီးသောအလယ်အလတ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်မိခင်၏ပုံသဏ္isာန်ဖြစ်ပြီး၊ သူသည် Sakura အားဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ninja အဖြစ်သင်ကြားသောအခါ၊ အမျိုးသမီးများသာပိုင်ဆိုင်သောအထူးကျွမ်းကျင်မှုများ၊ အမျိုးသမီးများသည်အနာရောဂါကုသသူများအနေဖြင့်စစ်မြေပြင်တွင်သာပါဝင်သည်ဟူသောအယူအဆကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ Naruto တွင်အခွင့်အာဏာရှိသူ Tsunade ကိုယ်တိုင်သူမသည်ရာထူးတူအမျိုးသားများမဟုတ်သည့်နည်းဖြင့်ရယ်စရာအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ Fujimoto ကဤတင်ပြချက်ကိုအမျိုးသမီးများအားတင်ပြခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်များသည်အများအားဖြင့် manga စာဖတ်သူများအကြားမနှစ်သက်သောဇာတ်ကောင်များဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နာရူတို&oldid=536966" မှ ရယူရန်
၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၆:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၆:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။